Microsoft inogadziridza OneDrive kuti ishande natively paM1 Macs | Ndinobva mac
Microsoft inogadziridza OneDrive kuti ishande natively paM1 Macs
Microsoft yakazivisa hurongwa hwekuvandudza yayo OneDrive app ku iyo inoshanda natively paApple M1 Macs mukupera kwa2021, pamwe nezvimwe zvakarongwa mashandiro ekuita. OneDrive parizvino inowanikwa neRosetta 2 pane M1 masystem.
Pakupera kwegore rino, Microsoft ichagadzirisa iyo Mac application kuti imhanye natively pane M1 michina. OneDrive parizvino inowanikwa neRosetta 2 pane M1 masystem.
Iyo yekuvandudza yakarongedzwa zvakare izvo yaizo gonesa inozivikanwa folda yekufambisa (KFM) yevashandisi veMacOS. KFM inobvumidza vanhu vanoshandisa OneDrive kuwana mafaera pane akasiyana madhivhisi nemaapplication, uye shanduko dzinozoenderana otomatiki neOneDrive. Zvakare, kana mushandisi akagadzira dhizaini yedhizaini, KFM inogona kungoisa zvese mafaera matsva kuOneDrive
Nyanzvi dzinogona zvakare kushandisa yepashure chivakwa ku otomatiki fambisa zvirimo zvemafolda edesktop, zvinyorwa uye mifananidzo kune OneDrive. Izvo zvakare zvichavandudza iyo OneDrive sync ruzivo rwevashandisi veMacOS, iyo ichave yakavakirwa pane Apple nyowani faira faira mupuratifomu. Iyo yekuvandudza ichavandudza iyo Finder chiitiko cheOneDrive, ichionekwa mu "nzvimbo" mubato reKutsvaga.
Zvingadaro shandisa manejimendi mishumo sync mune ramangwana. Vatariri vanozokwanisa kuona mishumo yakadzama pamusoro pevashandisi veMacOS vachimhanyisa OneDrive Sync uye chero zvikanganiso zvavanogona kusangana nazvo.
Sekuwedzera piritsi tinogona kutaura kuti pakupera kwaJune, vashandisi veIOS uye iPadOS vachakwanisa gadzirisa Hofisi zvinyorwa izvo zvavakaisa mucherechedzo wekushandisa kunze kwenyika muMicrosoft app nharembozha Mafaira akagadziridzwa anoenderana kuOneDrive kana mushandisi adzoka online. Izvi zvinobvumidza vashandisi kunhonga kwavakasiira kubva pane chakasiyana chishandiso gare gare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Microsoft inogadziridza OneDrive kuti ishande natively paM1 Macs
Apple inoda kubvisa mapassword mu macOS nekutenda kune mapassword
Mamwe mafoto eBeats Studio Buds, anotangisa ave pedyo